यी १० सेलीब्रिटीका के–के छन् नयाँ वर्षका योजना ? — Newskoseli
यी १० सेलीब्रिटीका के–के छन् नयाँ वर्षका योजना ?
नयाँ वर्ष हरेकका लागि ठूलो उत्सव हो । नयाँ खुसी, उमंगका साथ नयाँ वर्ष आउने गर्छ । हामी अनेक वाचाहरू गर्छौं, अनेक सपना सजाउँछौँ । बितेको वर्षमा भएका गल्तीहरू नदोहो-यार्‍याउने प्रण गर्छाैँ । विभिन्न योजनाहरू बन्छन्, बनाइन्छन् ।
यी १० सेलीब्रिटीका नयाँ वर्षका योजनाबारेको खबर शुक्रबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।